एक duvet कभर छनौट गर्न को लागी साँचो | बेजिया
एक duvet छनौट गर्न को लागी कुञ्जीहरु
मारिया vazquez | 14/09/2021 12:00 | घर
के तपाइँको पुरानो नॉर्डिक पहिले नै उसको अन्तिम प्रहार दिईरहेको छ र यो अब उसलाई फेरी लुगा धुने पठाउन लायक छ? के तपाइँ एक नयाँ कोठा छ र एक नॉर्डिक भरण संग आफ्नो bedspread प्रतिस्थापन गर्न चाहानुहुन्छ? यदि तपाइँ कहिल्यै सामना गर्नुभएको छैन एक डुवेट किन्न, तपाइँ जान्न को लागी कसरी सबैभन्दा उपयुक्त एक छनौट गर्न को लागी केहि कुञ्जीहरु को आवश्यकता पर्दछ।
त्यहाँ संभावनाहरु को एक विस्तृत श्रृंखला छ जब यो एक Nordic किन्न को लागी आउँछ। कसरी थाहा पाउनुहुन्छ, जो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो? Bezzia मा आज हामी तपाइँलाई यो खरीद प्रक्रिया मा मार्गदर्शन गर्न को लागी, तपाइँ के मा हेर्नु पर्छ, के बारे मा विवरण को प्रयास गर्नुहोस् तपाईले के दिमागमा राख्नु पर्छ राम्रो किन्नको लागी।
1 प्राकृतिक वा सिंथेटिक भर्न?
1.1 प्राकृतिक भराव
1.2 सिंथेटिक भराव
प्राकृतिक वा सिंथेटिक भर्न?
भराव सामग्री को लागी एक निर्धारण कारक हो पर्याप्त इन्सुलेट शक्ति प्राप्त। त्यहाँ प्राकृतिक fillers र परम्परागत फाइबर, पलिएस्टर खोखला फाइबर वा microfibers को सिंथेटिक fillers छन्। पेशेवरहरु र सामाग्री को प्रत्येक को विपक्ष जान्न को लागी तपाइँ तपाइँको पहिलो निर्णय गर्न मा मद्दत गर्दछ।
जब हामी प्राकृतिक भरण को बारे मा कुरा गर्छौं हामी पंख वा तल को बारे मा कुरा गर्छौं। पखेटा भर्न उनीहरु उखु कि उनीहरुलाई भारी बनाउँछ, कम स्पर्श को लागी सुखद बनाउँछ र उनीहरुलाई एक गरीब थर्मल इन्सुलेशन क्षमता दिन्छ जब तल संग तुलना गरीन्छ।
तल भरण तिनीहरू हल्का छन् र सबै भन्दा राम्रो थर्मल इन्सुलेशन गुण छ। जति धेरै तल भर्न मा प्रयोग गरीन्छ, हवा कक्षहरु को एक ठूलो संख्या मा बनाईएको छ, जसले राम्रो परिसंचरण र यस प्रकार गर्मी को एक राम्रो वितरण र नमी को छिटो वाष्पीकरण अनुमति दिन्छ।
तल प्रयोग को प्रकार को जान्न को लागी हामी एक द्वारा निर्देशित हुनु पर्छ भरण शक्ति को रूप मा परिचित मानक उपाय। यो भोल्युम लाई संकेत गर्दछ कि 28,35 g कब्जा गर्दछ। मानक अवस्थामा तल। यो एक तरीका हो, यसैले, यसको गुणस्तर मापन गर्न को लागी। बजार मा सबै भन्दा राम्रो नॉर्डिक भरण9वा 10 को एक भरिएको शक्ति को आसपास मा हुन्छन्, १० को मापन मा।
प्राकृतिक तल भर्न को इन्सुलेट लाभ स्पष्ट छ, यसैले बजारमा सबैभन्दा महँगो विकल्प। अर्को तर यो पनि फिलर को यस प्रकार मा शर्त बाट हतोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ: तथ्य यो हो कि हामी गर्न को लागी तिनीहरूलाई सफा गर्न ड्राई क्लीनरमा जानुहोस्.
तिनीहरू परम्परागत फाइबर, खोखला पलिएस्टर फाइबर वा माइक्रोफाइबर बाट बनेको हुन सक्छ। सबै सास फेर्न को लागी, कवक को प्रसार रोक्न र hypoallergenic छन्। Microfiber fillings ती हुन् कि सबै भन्दा राम्रो नकल प्राकृतिक तल, दुबै भोल्युम र इन्सुलेट शक्ति मा छन्। जे होस्, तपाइँलाई थाहा हुनु पर्छ कि उही गर्मी प्रदर्शन र थर्मल इन्सुलेशन को लागी, एक सिंथेटिक भरण सधैं एक तल एक भन्दा भारी हुनेछ।
सिंथेटिक fillers को महान लाभहरु मध्ये हो यसको मूल्य, सस्तो तल duvets को भन्दा। यसको फाइदा को अर्को धुने को सहज छ; यस प्रकार बच्चाहरु को कोठा र / वा दोस्रो घरहरुमा सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प बन्ने।
Duvet भित्र हावा कक्षहरु को गठन यसको इन्सुलेट क्षमता सुधार गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। कि भरण समानुपातिक वितरण गरीन्छ सबै duvet मा एक गुणस्तरीय उत्पादन मा कुञ्जी हो। एक तंग फिट हीरा-ढाँचा निर्माण सबैभन्दा राम्रो यो लक्ष्य पूरा हुनेछ। एक duvet १००% कपास बाट बनेको छ, जो भर्न सास फेर्न अनुमति दिन्छ, एक तंग, हीरा को आकार को निर्माण संग, यसैले सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
"प्रति वर्ग मीटर कागज को ग्राम मा तौल" यो कसरी RAE व्याकरण परिभाषित गर्दछ, एक शब्द हो कि एक उपाय को रूप मा कार्य गर्दछ एक duvet को गर्मी क्षमता। उच्च व्याकरण, उच्च गर्मी। सबैभन्दा उपयुक्त एक छनौट गर्न को लागी, यो खाता मा हाम्रो कोठा को परिवेश को तापमान र हाम्रो शरीर को तापमान दुबै लिन आवश्यक हुनेछ।
जब पनि हामी एक तातो घर को बारे मा कुरा गर्छौं जहाँ तापमान १º० डिग्री सेल्सियस तल झर्दैन, एक लगभग 200g / m2 व्याकरण यो हाम्रो आवश्यकताहरु लाई कभर गर्न को लागी पर्याप्त हुन सक्छ। धेरै चिसो ठाउँहरु मा जहाँ यो 15ºC भन्दा बढि छैन, तथापि, 400g / m2 सम्म को वजन संग एक duvet आवश्यक हुन सक्छ।
के तपाइँ अब सन्दर्भहरु लाई तपाइँ सबैभन्दा उपयुक्त duvet पाउन को लागी हेर्नु पर्छ को बारे मा अधिक स्पष्ट हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » एक duvet छनौट गर्न को लागी कुञ्जीहरु
एक विवाह को रहस्य: HBO श्रृंखला तपाइँ देख्न को लागी
डार्क चकलेट संग कुकीज, स्वादिष्ट!